Gisella Cardia - Vetivety, Tsy ho ela - Countdown to the Kingdom
Izahay dia	Gisella Cardia	, ny faha-26 may 2020:
Ry malalako, misaotra anareo miray amin'ny vavaka sy noho ny fihainoanao ny antsoko ao am-ponareo. Tsy ho ela, ho avy tsy ho ela ny Hazavoana [Fampitandremana], izay hametraka anao ao anaty fahasosorana * haharitra 15 minitra; indro, ny lanitra hamadika ny afo mirehitra - ho renareo ny feo mafy be, fa aza matahotra, satria io no hilazana fa ho avy ny Zanak 'Andriamanitra. ** Ry zanako malala, izao no fotoana rehefa ny Antikristy dia efa hanao ny fidirana aminy. Rehefa afaka izany, homeko toromarika hafa ianao. Ry zanaka malala, aza mivavaha fotsiny mba hangataka [momba ny zavatra], fa mba hisaorana ny Zanako Jesoa ihany koa amin'ny fiadananao sy ny ainao. Tiako ianao, anaka, ho eo akaikiko foana ianao. Tsarovy fa aorian'ny fahatoniana dia ho avy ny Rivo. Mivavaha ho an'ny mahery mba hahazo famindram-po amin'izy ireo Andriamanitra. Mivavaha ho an'ny Fiangonana sy ho an'ny pretra. Ankehitriny dia mitahy anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen.
*“State of ecstasy” (fanjakana tsy mahagaga raha tsy hajanona ny fahatsapana ara-batana); dia manondro ny "fahazavana ny fieritreretana" izay ho fahasoavana ho an'ny sasany ary fitsapana lehibe ny sasany. Jereo ny Ny ora sy ny fampitandremana.
** Jereo ny Timeline mba hahatakatra izany Atitany ny fahatongavan'i Kristy izay manambara ny Andron'ny Tompo.
Posted in Gisella Cardia, Messages, Ny vanim-potoana amin'ny Anti-Kristy, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana.
← Pedro Regis - Maro ny finiavana…
Ny 1942 →